လွတ်လပ်ရေးရပြီးစဉ်ကတည်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘ၀တွင် ဆူးကြီးသုံးချောင်း စူးဝင် နေ သလားစဉ်းစားမိ သည်။အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီအငြင်းပွားမှု၊လူမျိုးစုနိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ဘက်အရပ်ဘက် ဆက်ဆံရေးဆိုသော ပြသနာသုံးရပ် ဖြစ်ပါသည်။ပထမနှင့်ဒုတိယဆူး(အိုင်ဒီယိုလိုဂျီနှင့်လူမျိုးစု)ကို ဒီမိုကရေစီဘောင်အတွင်းမသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ရာမှ ပြည်တွင်း စစ်အထိအခြေအနေဆိုးခဲ့ရပြီး၊ တတိယ ဆူး (စစ်ဘက်-အရပ်ဘက်)မှာ အဆိုပါ ပြည်တွင်းစစ်၏အကျိုးဆက်ဟု သဘောရပါသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင် တစ်ခေတ်တစ်ခါက သြဇာကြီးနိုင်ငံရေးပါတီများဖြစ်သည့် ဗကပ၊အလံနီ၊ပြည် သူ့ရဲဘော် စသည်များကို ပြည်တွင်းစစ်ထဲကျွံစေခဲ့သော အိုင်ဒီယိုလိုဂျီပြသနာ မှာ ယခုအခါပွဲပြီးသလောက် ရှိသွား ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင်စွဲလမ်းသူ အနည်းအကျဉ်း ရှိ သလောက်ရှိသေးသည့်တိုင် နိုင်ငံတကာတွင်မူ အလေးထားရမည့် အာဂျင်ဒါထဲတွင်မပါဝင်တော့ ပါ။ ၁၉၈၉ ဘာလင်တံတိုင်းကြီးပြိုကျသွားသည်နှင့် ကမ္ဘာကြီး၏ တူရှုချက်မှာ ဈေးကွက်နှင့် ဒီမို ကရေစီဘက်ပီပီသသကြီးလှည့်ပြောင်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
သို့နှင့်အမျှ စစ်အေးအလွန်ကမ္ဘာတွင် ဘယ်သူက ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအကြောင်း မပြောကြတော့ ပါ။ လူတန်းစားမဲ့ ကွန်မြူနစ်လူ့ဘောင်အသာထားဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုပင် တူရှုချက်မထားတော့ပါ။ ၂၀၁၀ရွေး ကောက်ပွဲအကြိုကာလ ထွက်ပေါ်လာသော နိုင်ငံရေးပါတီ အဟောင်းအသစ်အားလုံးကိုကြည့်လိုက်လျှင် ဒီမိုကရေ စီရည်မှန်းချက်တူညီစွာရှိနေသည်ကို အလွယ်နှင့် တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့တွက် အိုင်ဒီယိုလိုဂျီဆူးကြီးမရှိတော့ပြီဟု ဆို နိုင်စရာအကြောင်း ရှိပါလိမ့်မည်။
ပြည်မရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများကြား ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပက်သက်သော သဘောထားအပေါ် ငြင်းခံ လို့ကောင်းနေဆဲမှာပင် ပြည်နယ်အသီးသီးမှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ပါတီများ အပြိုင်းအရိုင်းထွက်ပေါ်လာသည်ကို သတိပြုမိသည်။ ဤအချက်က တိုင်းရင်သားလူမျိုး စုများ အနေဖြင့် ပြည်မရှိ နိုင်ငံရေးပလေယာများထက် တိုင်း ပြည်၏ ပကတိအရှိကို ပို၍ ဖတ် နိုင်လေသလား စဉ်စားဖို့ရှိလာသည်။ အကယ်၍ ဤသို့ ဖြစ်လျှင်လည်း သဘာဝ ကျသည်ဟု ဆိုရ ပါလိမ့်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးပလေယာတော်တော်များများ (အများစုဟူ၍ ပင်ဆိုနိုင်လောက်ပါသည်)မှာ ၁၉၈၈ခုနှစ်မှ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသော်လည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအနေဖြင့်မူ လွတ်လပ်ရေးသက်တမ်းနှင့် အမျှကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော ခရီးရှည်ကြမ်းကြီးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ ကြပြီး ဖြစ်သည်။ သို့နှင့်အမျှ ရယ်ဒီကယ်လမ်းကြောင်း ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီး နိုင်ငံရေးအရ တစ်စုံတစ်ရာ ရင့်ကျက်နေပြီဟုဆိုရပါလိမ့်မည်။ ထိုထက် စစ်အေးလွန်ခေတ်၏ ပထမဆုံးဇတ်ကွက် ' ဘော်လကန်နိုက်ဇေရှင်း ' (အစိတ်အမွှာမွှာပြိုကွဲမှုဟု အဓိ ပ္ပယ်ရသည်) က လည်းခါးသီးသည့်အမှန်အချို့လှစ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ " အမျိုးသားရေးပြဿနာမှာ ဒီမိုကရေစီ၏ ထောင် ချောက် " ဆိုသော ပိုလန်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ သုံးသပ်ချက်ကို နှလုံးသွင်းနိုင်လောက်ပြီထင် ပါသည်။
ဤသို့သော အကြောင်းအကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး စုပါတီအများစုအနေ ဖြင့် မည်သည့်အဖွဲ့ကမှ ခွဲထွက်ရေးအကြောင်း မပြောတော့ပါ။ ' ဖွံ့ဖြိုး ရေး ' (Development) ကြွေးကြော်သံကို ထိပ်တင်ကာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ တာစူနေကြပေပြီ။ တန်းတူညီမျှရေးအခြေခံပေါ်တွင် ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဖန်တီခွင့်ရလျှင် ဘော်လကန်နိုက်ဇေရှင်း ဖြစ်နိုင် ဖွယ်မရှိပါ။ အဓွန့်ရှည်ကြာတည်တံ့ခိုင်မြဲမည့်ပြည်ထောင်စုကြီးကို ညီညီညွတ် ညွတ်လက်တွဲတည် ဆောက်နိုင်စရာရှိပါသည်။ ဤမျှော်လင့်ချက်နှင့်ပင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပါတီများဖြင့် ယခု လာ တော့မည့်ရွေးကောက်ပွဲကို လက်တွေ့ကျကျကြည့်မြင်ကြဟန်ရှိပါသည်။ ဤခြေလှမ်းသည်ပင် ဒု တိယ ဆူး(လူမျိုးစုပြဿနာ) ဖယ်ရှားနိုင်ရေးအတွက် အဖွင့်ကျားကွက်ဖြစ်တန်ရာသည်။
အကယ်၍ ဒုတိယဆူးကိုသာ အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဆိုလျှင် တတိယဆူး(စစ်ဘက်-အရပ်ဘက်ဆက်ဆံ ရေးပြဿနာ)ကိစ္စတွင်လည်း တစ်ဝက်မက ခရီးရောက်သွားပါလိမ့်မည် ထင်သည်။ သို့နှင့်တိုင် ဤကိစ္စကိုမူအလော တကြီး ဖြေရှင်းဖို့မသင့်ဟု သဘောရသ်ည။ ' ဘုံတူညီ ချက် '(Common ground)ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ' စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးမှု ' ကို လက်တွဲကြိုးပမ်းရင်း စိတ် ရှည်လက်ရှည်ညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြမည်ဖြစ်ရာ အချိန်ကာလတစ်ခုယူရပါလိမ့် မည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၂၀၁၀၁အလွန်အခင်းအကျင်းသစ်တွင် ဒုတိယဆူးကို ဖယ်ရှား နိုင်လျှင်ပင် မင်္ဂလာရှိလှပြီ ဟုဆိုချင်သည်။ အပြီးတိုင်မဟုတ်လျှင်သော်မှ (အနိမ့်ဆုံး) အခြေခံ တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိသည်။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးသာဖြစ်သော စာရေးသူအနေဖြင့်မူ ဤမျှော်လင့်ချက်နှင့်ပင် ရှေ့လ ၇ ရက်တွင် မဲရုံသို့ သွားဖြစ် အောင်သွားပါမည်။
Posted by ဦးကျော်လင်းဦး at 7:44 PM 1 comment:
မြန်မာပြည်သို့ ပေးစာများ (၁)
တကယ်တော့ gtalk မှာပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ သတိမရတော့ဘူး။ နောက်ပြီး အဲဒီတုန်းက ချက်ချင်းပြောလိုက်ပေမယ့် အခု ပြန်စဉ်းစားတော့ သိပ် မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ရှပ်နီ၊ ရှပ်ဝါ ကိစ္စကိုပဲ သွားရအောင်။
ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာ ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်း တော်တော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဇတ်လမ်းရဲ့ အစက ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ သက်ဆင် ရဲ့လက်ထက် လဒ်စားမှုတွေကနေ စတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်တဲ့ ပညာတတ်မြို့နေ လူတန်း စားက ဆန္ဒပြတယ်။ အဲဒီ အုပ်စုဟာ နောက်အချိန်မှာ ရှပ်ဝါ အုပ်စုဖြစ်လာမယ့် အုပ်စုပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်း က အ၀ါ မ၀တ်သေးဘူး။ သက်ဆင် ဆန့်ကျင်ရေး အင်အားစု လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ လမ်းမပေါ်မှာ ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အာဏာရ သက်ဆင်က တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေ စီ စနစ်ရဲ့ ထုံစံအတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ ပြန်ကျင်းပပေးတယ်။ အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သက်ဆင်ပဲနိုင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ မတရားဘူး၊ မမျှတဘူး လို့ အတိုက်အခံက စွပ်စွဲတော့ သက်ဆင်က နောက်ထပ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်ကျင်းပပေးဖို့ ကတိပေးတယ်။ ဆန္ဒပြသမားတွေ တောင်းဆိုသလို သူတော့ မနှုတ်ထွက်နိုင်ဘူး ပေါ့။ ဒီ တကြိမ်မှာတော့ အတိုက်အခံပါတီတွေ အားလုံးက ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် တယ်။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သက်ဆင်ရဲ့ ပါတီတစ်ခုတည်းကပဲ ပြိုင်ရတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ် ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာ မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်မှာ ဆန္ဒမဲ ပေးတဲ့သူတွေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက မဲမထည့်ယင် အဲဒီ လွှတ်တော်အမတ်ကို နိုင်တယ်လို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လွှတ်တော် နေရာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အမတ်တွေဟာ နောက်ထပ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လုပ်ရမယ့် အနေအထေားကို ရောက်သွားတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ နေရာတွေဟာ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်ကို ထောက်ခံတဲ့ နေရာတွေလေ။
ဒီလို နဲ့ နိုင်ငံရေးက အဖြေရှာမရပဲဖြစ်နေတယ်။ သက်ဆင်သာ မနှုတ်ထွက်ယင် အတိုက်အခံတွေကလည်း နောက်ရွေးကောက်ပွဲ ထပ်ကျင်းပလဲ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးလို့ ပြောနေတယ်။ သက်ဆင်ကလည်း မနှုတ်ထွက် ဘူးလို့ ခေါင်းမာနေတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး သက်ဆင်ကို ဖယ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၀၆ အာဏာသိမ်းမှုဟာ တခြားဘယ်နိုင်ငံက အာဏာသိမ်းမှုမျိုးနဲ့မှ မတူဘူး။ စစ်တပ်က အာဏာလိုချင်လို့ အာဏာသိမ်းတာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေး ဖြေရှင်းချက် တစ်ရပ်ကို လုပ်လိုက်တာလို့ အကို နားလည်တယ်။ ဒါကို အနောက်နိုင်ငံတွေက နားမလည်ဘူး။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယင် မကောင်းဘူး ချည်းပဲ စွပ်ပြောနေတော့တာပဲ။
စစ်တပ်က တစ်နှစ်ပဲ အာဏာယူမယ်။ အခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲမယ်၊ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပပြီး အနိုင်ရတဲ့လူတွေကို အာဏာလွှဲပေမယ်လို့ ကတိပြုတယ်။ တကယ်လဲ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လေးမှာ ရွေး ကောက်ပွဲ အသစ်ကျင်းပပြီး အာဏာကို ပြန်လွှဲပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတာက သက်ဆင် ဘက်တော်သာ ပြည်သူ့အာဏာ ပါတီလေ။ အဲဒီ ပါတီ အာဏာရတော့ သက်ဆင်ကို စွဲချက်ထားတဲ့ အမှုတွေကို ပြေငြိမ်းအောင်လုပ်တယ်။ သက်ဆင်ဆီက သိမ်းထားတဲ့ ဓန တွေကို ပြန်ပေးဖို့ အားထုတ်တယ်။ သက်ဆင် ကလည်း သူ့လူတွေ အာဏာပြန်ရတော့ ပြည်တော် ပြန်လာခဲ့တယ်။ သက်ဆင် လူတွေ အာဏာပြန်ရလာတယ် ဆိုပေမယ့် သူတို့က နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့မရတဲ့ အနေအထားရှိနေတယ်။ စစ်အစိုးရ လက်ထက်ပ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အာဏာအလွဲသုံးစားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အာဏာရ အစိုးရ စွပ်ဖက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက မဲခိုးမှုတွေ ရှိတယ်လို့ ပြည်သူ့အာဏာ ပါတီအပေါ် စွပ်စွဲမှုတွေလည်း ရှိနေတယ်။ ဒီစွပ်စွဲမှုတွေကို ထင်ရှားကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ယင် ပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရနိုင်တယ်။ ဒါက အသစ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေ ထဲမှာ ထည့်ပြီး ရေးဆွဲထားတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆင် ဘက်တော်သား ပါတီက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ကို လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ အဲဒီမှာတင် သက်ဆင်လက်ထက်တုန်းက ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အ၀ါဝတ်တွေက လမ်းပေါ်ပြန်ထွက်လာတယ်။ အဲဒီ အချိန် မှာ သူတို့ ရှပ်ဝါတွေ ၀တ်နေကြပြီ။ ရှပ်ဝါ ဆိုတာ ဘုရင့်ရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်တယ်။ ဘုရင်ရဲ့ အနှစ် ၈၀ ပြည့် မွေးနေ့တုန်းက အင်္ကျီ အ၀ါတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံး ၀တ်ကြဖို့ အဲဒီတုန်းက ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ သက်ဆင်က လှုံ့ဆော်ဘူးတယ်။ အခု သူ လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ အင်္ကျီအ၀ါကို ၀တ်ပြီး သူ့ကို ပြန် စိမ်ခေါ်နေတာ တရားကျစရာတော့ ကောင်းတယ်။
အဲဒီ အုပ်စုဟာ ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ဘုရင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်နေပြီ။ နောက်ပြီး တပ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ သက်ဆင်ဆန့်ကျင်ရေး အုပ်စုနဲ့ ပေါင်းမိနေပြီ။ ဒါကြောင့် အစိုးရက ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဒီ ရှပ်ဝါ တွေက ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးထိ ၀င်သိမ်းပြီး ၀န်ကြီးချုပ် စမတ်ကို ကန်ထုတ်လိုက်တယ်။ ၀န်ကြီး ချုပ်က ရုံးထိုင်စရာ နေရာတောင် ပျောက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆန္ဒပြသမားတွေ တောင်းဆိုသလို ၀န်ကြီးချုပ် နှုတ်ထွက်ပေးဖို့၊ အစိုးရဖျက်သိမ်းဖို့ကတော့ မလုပ်ဘူးလို့ ငြင်းဆန်နေတယ်။ ဒီမှာတင် တရားရုံးက ၀န်ကြီးချုပ် ဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးယူထားစဉ်အတွင်း တီဗီမှာ ဟင်ချက်တဲ့ အစီအစဉ်ကို ရိုက်ကူးခဲ့တယ်၊ အဲဒါကြောင့် သူ့ မှာ အပို ၀င်ငွေရနေတယ် ဆိုပြီး ရာထူးကနေ ဖယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ရေးထားတဲ့အချက်ပဲ။ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ ရနေတဲ့ လုပ်ခ လစာ အပြင် တခြားဘယ် ကမှ လုပ်ခ လစာ မစားရဘူးဆိုတဲ့ ပြဌာန်းချက် ရှိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စမတ်လဲ ဒိုးသွားတယ်။ စမတ် ပြီးတော့ သက်ဆင် ရဲ့ ယောက်ဖ ၀ုန်စ၀ပ် တက်လာတယ်။ သူ အာဏာရတဲ့ နေ့မှာပဲ ဆန္ဒပြတဲ့ လူတွေက လွှတ်တော် ကို ၀ိုင်းလို့ ရဲ့ မျက်ရည်ယို ဗုန်းနဲ့ ဖြိုးခွဲတာ လူ ၂ ယောက်သေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်သက်တမ်းကို စ ခဲ့တယ်။ သူ အာဏာရပေမယ်လည်း ဆန္ဒပြသမားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို မလိုက်လျော သေးဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ နိုဝင်ဘာ လ ကုန်ပိုင်းမှာ အ၀ါဝတ်တွေက လေဆိပ် ၂ ခုကို သိမ်းပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်က ၀န်ကြီချုပ်က ဘရာဇီကနေ ပြန်လာမယ့် အချိန်။ သူတို့က လေဆိပ်ကို သိမ်းထားတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ လေယဉ်က ချင်းမိုင်မှာ သွား ဆင်းရတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ တရားရုံးက ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အာဏာရပါတီက မဲခိုးတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားကြောင်း ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက် ပြည်သူ့အာဏာပါတီ အဖျက်သိမ်းခံရတယ်၊ ၀န်ကြီးချုပ်အပါအ၀င် ပါတီ ခေါင်းဆောင် ၃၀ ကျော် နိုင်ငံရေးကနေ ၅ နှစ် အပိတ်ပင်ခံရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သက်ဆင် ဘက်တော်သား ပါတီ လည်း အာဏာ လက်လွှတ်သွားတယ်။ ရှပ်ဝါတွေလည်း သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် အောင်ပြီဆိုပြီး ဆန္ဒပြတာကို ရုတ် သိမ်းသွားတယ်။
ဒီနောက်တော့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်က လွှတ်တော် အမတ်အများစု ရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ အစိုးရဖြစ်လာတယ်။ အယင် ပြည်သူ့အာဏာပါတီက အမတ်တချို့လဲ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးထဲမှာ ပူးပေါင်းလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဘီဆစ် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒီမှာတင် အဘီဆစ် အာဏာရတာကို မကျေနပ်လို့ သက်ဆင်ရဲ့ လူတွေက အနီဝတ်ပြီး လမ်းပေါ်ကို ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၉ သင်္ကြန်မှာ အဓိကရုန်းတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်က ဖြိုခွင်းလိုက်ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက လူ အသေအပျောက် မရှိခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၀ မတ်လ မှာ သူတို့ တခါ လမ်းပေါ် ပြန်ထွက်လာပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပွဲက တော်တော်ကြမ်းတယ်။ အဘီဆစ်တောင် အာဏာလက် လွှတ်ဖို့ တဲတဲလေး လိုတော့တယ်။ အနီဝတ်တွေရဲ့ စွပ်စွဲချက်က အဘီဆစ်ဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲ အာဏာရတာမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေး အီလစ်တွေက ထိုးတင်ပေးလိုက်လို့ အာဏာရလာတာလို့ စွပ်စွဲတယ်။ ဒီ စွပ်စွဲချက်ကို အနောက်နိုင်ငံတွေက သံယောင်လိုက်တယ်။ သက်ဆင်ကိုပဲ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ သူရဲ ကောင်းကြီးအဖြစ် ပုံဖေါ်တယ်။ တကြိမ်မှာများ ဆိုယင် သက်ဆင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ် ခိုင်းနှိုင်းပြီး ပြောတယ်။ ဒါကို ဒေါ်စုကလည်း ဘယ်လို နားလည်မှု လွဲလဲ မသိပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အဲဒီတုန်းက အခြေအနေတွေကို စစ်တပ် အာဏာကိုယူပြီး အခြေခံဥပဒေကို ဇွတ်ရေးဆွဲလို့ အဲဒီ အခြေခံဥပဒေကို မကျေနပ် တဲ့ လူထုက လမ်းပေါ်ထွက်လာတာလို့ ဝေဖန်တယ်။ တကယ်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဟာ စစ်တပ်က ရေးဆွဲတဲ့အခြေခံဥပဒေကြောင့်မဟုတ်ပဲ၊ အာဏာ ကုလားထိုင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အာဏာရူးလို့ အခုလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရတာလို့ အကိုတော့ မြင်တယ်။ အာဏာရ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ကိုယ်ကျိုးရှာပြီး အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်နေမယ်ဆိုယင်တော့ စစ်တပ်က လူထုအကျိုးကို ကာကွယ် ဖို့အတွက် အာဏာသိမ်းတာဟာ တရားတယ်လို့ အကိုယူဆတယ် ညီမ။
တကယ်တော့ အနီဝတ်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သက်ဆင်လက်ထက်က အာဏာရခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တွေနဲ့ နောက်လိုက်တွေက နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းက ဆင်းရဲတဲ့ လယ်သမားတွေပဲ။ ဒီ လယ်သမားတွေက သက်ဆင်လက်ထက်တုန်းက ကျေးရွာတွေကို ငွေအဆမတန်ချေးခဲ့တာ၊ ဘတ် ၃၀ နဲ့ ဆေး ကုခွင့်ရတာတွေကို အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး သက်ဆင်ကို ထောက်ခံနေတဲ့ အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်။ တချိုကတော့ သက်ဆင်ရဲ့ လူတွေက နေ့တွက်ပေးပြီး ခေါ်လာတဲ့ လူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလူတွေက ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်၊ သူတို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေဟာ ပြည်သူ့တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကို ၀င်သိမ်းထားတယ်။ ဒါကို အနောက် မီဒီယာတွေကလည်း ဒီမိုကရေစီအရေး အုံကြွမှုအဖြစ် ရေးသားတယ်။
အဘီဆစ်က အနီတွေ ဘန်ကောက်မြို့ကို ၀င်သိမ်းထားစဉ်အတွင်း အနီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတယ်။ ညှိနှိုင်းတယ် ဒါပေမယ့် သဘောတူညီချက် မရခဲ့ဘူး။ သဘောတူညီချက် မရတဲ့အကြောင်းက လွှတ်တော်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖျက်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ ၂ ဘက် သဘောတူညီချက် မရဘူးဖြစ်သွားတယ်။ အနီဘက်က ၂ ပတ်အတွင်း ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုပြီး အစိုးရဘက်ကတော့ ၉ လလောက် အချိန်ယူရမယ်လို့ တင်ပြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်သွားတယ်။ အနီတွေက မြိုလမ်းကို ဆက်သိမ်းထားတုန်းပဲ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အားလုံးလဲ ရပ်သွားတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲကလည်း ရပ်မယ့် အခြေအနေမရှိဘူး။ အခြေအနေဟာ တော်တော် စိုးရိမ် စရာကောင်းနေတယ်။ စစ်တပ်ကလည်း ၀န်ကြီးချုပ်သာ သဘောတူယင် ၀င်ရှင်းမယ်လို့ ပြောနေတယ်။ ဒီ အချိန်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဟာ အချက် ၅ ချက်ပါတဲ့ လမ်းပြမြေပုံကို တင်ပြတယ်။ ဒီ အချက်တွေကို သဘောတူယင် နိုဝင်ဘာလမှာ လွှတ်တော် ဖျက်သိမ်းပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီအချက် ငါးချက်က နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ မီဒီယာ အစရှိတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့ပဲ။ ဒီလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်တဲ့ နေရာမှာ သက်ဆင်ဘက်တော်သား အတိုက်အခံတွေ ပါဖို့လိုတယ်။ သူတို့ ပါမှ ဒီလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ အောင်မြင်မယ်လို့ ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက် ၅ ချက်မှာ သက်ဆင်အတွက်မပါဘူး။ သက်ဆင် အတွက် ထည့်မစဉ်းစားထားဘူး။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ နောက်ဆုံးမှာ အနီဝတ်တွေက ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ၅ ချက်ကို ပယ်ချလိုက်တယ်။ ဒီလို ပယ်ချတဲ့အခါကျမှ စစ်တပ်က တာဝန်ယူပြီး အနီဝတ်တွေက စရှင်းတယ်။ အနီ ၀တ်တွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပစ်လို့ လူ ၉၀ လောက်သေတယ်။ တစ်ထောင် ကျော် ဒဏ်ရာ ရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ထိုင်းနိုင်ငံရေး ဒရမ်မာကြီး တစ်ခန်းရပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇတ်လမ်းက မပြီး သေးဘူး။ အခု ထက်ပြီး ဗုံးဖေါက်မှုတွေ၊ ဗုံးတွေ တွေ့နေတာတွေ၊ အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ အိမ်တွေ၊ ရုံးတွေကို လောင်ချာနဲ့ ထုတာတွေ ဆက်ရှိနေတုန်းပဲ။ တည်ငြိမ်မှု ရဖို့ ဝေးနေတုန်းပဲ။
ထိုင်းနိုင်ငံရေးဟာ ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ ဒီနိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်က အရေးပါသလို၊ ဘုရင်ကလည်း အရေးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သဘောထား ဆန္ဒတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရေး ကို ပုံဖေါ်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတယ်။ အနီဝတ်တွေဟာ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ သက်ဆင်နဲ့ ပတ်သက်မိလို့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေလို့ ပြောလို့မရတော့ဘူး။ သူတို့ဟာ သက်ဆင်ကိုပဲ အလုပ်အကျွေးပြု မယ့်လူတွေအဖြစ် ဝေဖန်တာကို ခံရတယ်။ ဒါကို နားမလည်တဲ့ အနောက်တိုင်းသားတွေက သက်ဆင်ဘက် တော်သားကို ဆင်းရဲတဲ့ လယ်သမားတွေ သူတို့အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုတာလို့ ပြောတယ်။ ဒါဟာ မှားတယ်။ တကယ်ဆို ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မူ ၅ ချက်မှာ ဆင်ရဲသားတွေရဲ့ ဘ၀ တိုးတက်ရေးကို ဦးတည် ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆင်းရဲသားတွေက ဒါကို နားမလည်ဘူး။ သူတို့ ခေါင်းဆောင်တွေ ပြောတာကို မျက်စိ မှိတ်ယုံနေတယ်။ သူတို့ အကျိုးဟာ ဘာလဲ ဆိုတာတောင် နားမလည်တော့လောက်အောင် မှိုင်းတိုက်ခံနေရ တယ်။
ဒီလိုပဲ မြန်မာပြည်သူတွေလည်း နိုင်ငံရေးသမား တစ်စုရဲ့ မှိုင်းတိုက်ခံရခြင်း ကင်းဝေးပါစေ။
Posted by ဦးကျော်လင်းဦး at 1:00 AM No comments:
နှင်းပွင့်ဖြူ နှင့် စကားစမြည် (၁)
Snow: အကို မသိလောက် တစ်ခုလောက် မေးပါရစေ။
me: မေးပါ ညီမ။
Snow: အဲဒီ NDF ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ အကို။
me: ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်း တို့
ဟိုအယင်က NLD ခေါင်းဆောင်တွေ
Snow: သြော်။ ဟုတ်ကဲ့ အကို။ ဒါနဲ့ သူတို့ကို မဲထည့်တော့ ညီမ တို့ ဘယ်လို အကျိုးတွေ
ခံစား ရမှာတုန်း။ အဲဒါ နဲနဲတော့ ရှင်းပြပေးပါဦးနော် အကို။
me: လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ ဘယ်သူပဲ မဲအများဆုံးနိုင်နိုင် အစိုးရမဖြစ်နိုင်ဘူး
အစိုးရက စစ်အုပ်စုပဲ ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် NDF က ၁၆၀ လုံးနိုင်ယင် အားကောင်းတဲ့အတိုက်အခံဖြစ်နိုင်တယ်။
Snow: ဒါဆို ……………….
me: အားကောင်းတဲ့အတိုက်အခံဖြစ်ယင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ
တော့ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက လူထုကို မတရားလုပ်တာတွေ၊ အနိုင်ကျင့်
တာတွေကိုတော့ ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်။ လောလောဆယ် ရွေးကောက်ပွဲက ဒီအဆင့်
Snow: တကယ်လို့ သူများတွေ ပြောနေသလို စစ်တပ်ကပဲ အမြဲတမ်း အာဏာကို တစ်သက်လုံးပဲ
ယူထားယင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အကိုရဲ့။
Me: စစ်တပ်ကပဲ တစ်သက်လုံး အာဏာလိုချင်လို့ ပဲ ဒီလို အခြေခံဥပဒေမျိုးရေးဆွဲပြီး တရားမျှတ
မှုမရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပတာပဲလေ ညီမရဲ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ
စနစ် ကို သွားပါမယ်လို့ ကတိခံထားတဲ့အတွက်၊ တခြားပါတီတွေကိုလည်း ၀င်ပြိုင်ခွင့်ပေးရ
တယ်။ လွှတ် တော်ထဲမှာလဲ အတိုက်အခံဆိုတာကို ခွင့်ပြုရတယ်။ ဒါဟာ ဟို အယင် ဗိုလ်ချုပ်
နေ၀င်းလက်ထက် တုန်းက တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ မတူတဲ့ အချက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် လက်
ရှိ စစ်အစိုးရဟာ ဒေသ တွင်းမှာရှိတဲ့ စင်္ကာပူလို၊ မလေးရှားလို အစိုးရကချည်းပဲ အမြဲတမ်း နိုင်
နေအောင်၊ အတိုက်အခံ ဘက်မှာ အားနည်းချည့်နဲ့သွားအောင် ကြိုးစားကောင်း ကြိုးစားလိမ့်
မယ်။ အကိုတို့လုပ်ရမယ့် တာဝန်က စင်္ကာပူလို၊ မလေးရှားလို အဖြစ်ခံလို့ မဖြစ်ဘူး။ အကိုတို့
က အတိုက်အခံ တွေဟာ အားကောင်းတဲ့ အတိုက်အခံတွေဖြစ်ရမယ်။ အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ
ကို စိန်ခေါ် နိုင်တဲ့ အတိုက် အခံ မျိုးဖြစ်ရမယ်။ အစိုးရ ၀န်ကြီးတစ်ယောက်ကို လွှတ်တော်ထဲမှာ
မေးခွန်းပြန်ထုတ်နိုင်တဲ့၊ မေးခွန်းပြန် ထုတ်ရဲတဲ့ အတိုက်အခံမျိုးဖြစ်ရမယ်။ ဒါမှ အစိုးရက ထင်
သလို လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့် ဆိုးတွေကို ထိမ်းလို့ရလိမ့်မယ်လို့ အကိုမြင်တယ်။
Snow: ဒါတော့ ဟုတ်ပါတယ် အကို။ အစိုးရကို မကြောက်မရွံ့ပြန်ပြောရဲ တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ
ညီမတို့ နိုင်ငံမှာ တကယ်ကို လိုနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် NDF ကရော ဒီလိုမျိုး သတ္တိရှိပါ့
me: NDF ခေါင်းဆောင်တွေက ဟိုအယင်က NLD မှာလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေပါ။ ဒီလို လုပ်
ခဲ့ လို့လဲ ထောင်တွေ၊ တန်းတွေ ကျပြီးပြီ။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့
အကြုံလဲ ရှိပြီးသား။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ မစိမ်းတဲ့လူတွေပါ။ သူတို့မှာ အနည်းဆုံး
နိုင်ငံရေးသက် အနှစ် ၂၀ ရှိနေပြီးတော့ စစ်အစိုးရအကြောင်းကိုလည်း ကောင်းကောင်းသိနေ
တဲ့ လူတွေပါ။ အခု ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရတာကလည်း လွှတ်တော်ထဲမှာ အတိုက်အခံ
အဖြစ်နဲ့ လူထုရဲ့ အခွင့်အရေး တွေ ကာကွယ်ပေးချင်လို့၊ အာဏာရှိတဲ့လူတွေက အာဏာ
ကို အလွန်အကျွန်သုံးပြီး လူထုကို ဖိနှိပ် နေယင် ထိန်းညှိပေးချင်လို့၊ ဒီထက်ပို အရေးကြီးတဲ့
အချက်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးယင် အာဏာရလာမယ့် စစ်အုပ်စုကို အတိုက်အခံနဲ့၊ လွှတ်
တော်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ နိုင်ငံရေးလုပ် တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးချင်လို့ NDF က ရွေး
ကောက်ပွဲဝင်တာပါ။ ဒါကြောင့် လွှတ်တော်ထဲမှာ အားကောင်းတဲ့ အတိုက်အခံရှိရေးအတွက်
NDF ၀င်ပြိုင်မယ့် နယ်တိုင်းမှာ လူထုက ထောက်ခံ အားပေးဖို့ လိုတယ် ညီမ။ ဒီကနေ တစ်
ဆင့် နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ၃၃၀ စလုံး အရွေးခံနိုင်ယင် ၃၃၀ စလုံး အနိုင်ရခဲ့ယင်
အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ရေး နဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ် ပြုပြင်ရေးကို ရှေ့တိုးပြီး လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါ
Snow: အကိုပြောတာ ညီမ သဘောပေါက်သွားပြီ။ စိတ်ချပါ အကို။ ညီမ NDF ကိုပဲ မဲထည့်ပါ့
me: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမရယ်။
Posted by ဦးကျော်လင်းဦး at 11:31 PM No comments:
Posted by ဦးကျော်လင်းဦး at 8:46 AM No comments:
My parents are NLD and I was member of DPNS in 1988. It seems that
being part of the opposition is in my genes and in my blood. I was
greatly disappointed by the decision of the NLD to boycott the
elections, although I understand the emotional and political stand of
this very difficult decision. Nonetheless, I will stand behind the
lady throughout my life, she is my only hero. I have never seen
someone like her in my life. Her honesty, beliefs, stands, scarifies,
braveness, and courage for this country is second to none. She is the
great national hero of our age and she will always be our national
hero no matter who says what. But she has been isolated from ordinary
people for suchalong time; I do not think she can make the right
decisions from so long an exile in her home.
I think the NLD madeabig mistake because no one in Burma can come
out on the street and demonstrate for them, since they are not
engaging in the political process. Of course the entire process is
corrupt but still we must work with it from the inside, not by
isolating ourselves from it. I wish some NLD members could be in
Parliament and speak out against the unfairness of this regime. I know
that people would be behind any Parliament member who would bravely
speak out for lawfulness, fairness and to change the constitution. Now
no member of the NLD can possibly be in parliament so there will only
be pro regime thugs and I no longer see the end of the Than Shwe era.
I think we have lost NLD forever. Forgetful Burmese may not remember
half of NLD in three years. It’saterrible development.
After 20 years of standing with the opposition, I realize that the
future of this country is going nowhere. My country is stillaslave
pool for neighboring states, and people die unnecessarily of easily
curable diseases. Fifty percent of people die half way through their
life span, and the younger generation is trying to leave this country.
Corruption is worsening each day. This military regime is the worst of
my lifetime and if I could I would end it withablink of my eye, but
this will not happen. The opposition, including me, within Burma or in
exile has failed to bring freedom to this country in 20 years.
This failure makes me realize it is time to evolve. I was pro
sanctions for many years but now I have great doubts that sanctions
can ever achieve freedom for Burma. If the regime does nothing for
this country and people of this country have no means to fight them
back, the best way for us would be lifting the sanction. It’s the
only humanitarian thing to do.
I used to blindly say NO to anything this regime stood for, and always
sided with the NLD. But I now accept that sanctions are only hurting
the ordinary Burmese people, not the government. I now know changes
will come only when enough educated people with enough opportunities
exist in my country. In order to get enough education and enough
opportunities to the Burmese people, to change this country in 5-10
years, what we now need is the lifting of sanctions. I no longer want
to waste precious time and opportunity.
We should all consider whether the waste of lives and opportunities in
Burma are not only the fault of the regime, but that the world body is
also to blame. In order to evolve we must join the world body. We all
know that the real changing force is inside the country, that it will
come from the people, and the rest of the world should give us equal
opportunities by lifting sanctions. This will bring about change in
the shortest possible time frame.
I know you love this country, and the innocent, friendly people of
Burma. I greatly respect the work you have done for us so far. I hope
you will do everything in your power to help us change.
Your beloved friend!
Posted by ဦးကျော်လင်းဦး at 4:25 AM No comments:
Posted by ဦးကျော်လင်းဦး at 5:53 AM No comments:
Posted by ဦးကျော်လင်းဦး at 8:44 AM No comments: